ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစွဲဆိုတဲ့ အဂတိမှုတွေအတွက် ရှေ့နေလက်မှတ်ယူ
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့ နေတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဇော်က မီဒီယာများကို ဖြေကြားစဉ် ( ဓာတ်ပုံ - AP)
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုစွဲချက်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီက တရားစွဲထားတဲ့အမှုတွေ ရင်ဆိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးမှာ တင်ထားတဲ့အမှု အဂတိလိုက်စားမှု ၄ မှုနဲ့ပါတ်သက်လို့ သူ့ရှေ့နေတွေဘက်က အသေးစိတ် အသေအချာ မသိကြရသေးပါဘူး။ နေပြည်တော်မှာ စစ်ဆေးနေတဲ့ အမှုတွေထဲက ၂ မှုကိုတော့နေပြည်တော် သီးသန့်တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုတွေအကြောင်း နောက်ဆုံးသိရထားသမျှ ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်း မခင်ဖြူထွေးပြောပြပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစွဲထားတဲ့ထဲက အသေးစားအမှုတွေအတွက် နေပြည်တော် သီးသန့်တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ဆက်လက်စစ်ဆေးပါတယ်။ သူ့အပေါ် မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးမှာ စစ်ကောင်စီက အမှုဖွင့်ထားတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၅ ချိုးဖောက်မှု၊၄ မှု ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့ရှေ့နေတွေကို ဒီနေ့ရုံးချိန်းတွေ့စဉ် ရှေ့နေလိုက်ခွင့် လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ အမှု ၄ ခု ထပ်တိုးတယ်ဆိုတာသာ လောလောဆယ်သိထားပြီး အမှုတွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေခုထက်ထိ မသိရသေးဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စန်းမာလာညွှန့်ကပြောပြပါတယ်။
" ကိုယ်စားလှယ်စာရပြီ. အမတို့ရုံးချိန်းက ၂၂ ရက်နေ့မှလေ။ အမတို့သေချာတော့မသိသေးဘူး. ရဲမှုးပြောတာကတော့ အန်တီက တယောက်ထဲ ၂မှု၊ ၃ယောက်တွဲ ၂မှု ၊ ၃ယောက်တွဲကတော့ ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ကိုရဲမင်းဦးနဲ့တမှု၊ ဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့ ဦးမင်းသူနဲ့ တမှုပေါ့။ အဲလိုပြောတာဘဲ။ အမတို့ကသေချာကိုမသိသေးတာ၊အမှုသွားတင်မှသာသိမှာ။ အန်တီတယောက်ထဲ ၂မှု၊၃ယောက်တွဲက ၂ မှု အဲလိုပေါ့။ ပြီးခဲ့အပတ်က ရမာန်ပေးတယ် လာမယ့်ရုံးချိန်းမှာပါဝါတင်မယ်။"
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် လာဘ်ထိုးတဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခြောက်သိန်း နဲ့ အကယ်ဒမီ အခေါက်ရွှေ ခုနစ်ပိဿာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံယူခဲ့တာအပြင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်တို့မှာ မြေနေရာရယူတာ၊ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရာထူးအာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကိုအဂတိလိုက်စားမှုကော်မရှင်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ ဇွန်လကစစ်ကောင်စီက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကို အခြေခံပြီး အခုမှ မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးမှာ စစ်ကောင်စီက အမှုတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အစောပိုင်းက တရားစွဲခံထားရတဲ့ အမှုတွေထဲက အများ ပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လှုံဆော်၊ လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုပြီး ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅-ခ နဲ့ စွဲထားတဲ့ အမှုနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ တို့ကိုဒီနေ့ ဆက်လက် ကြားနာပါတယ်။သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နဲ့စွဲထားတဲ့ အမှုအတွက်မျက်မြင်သက်သေတွေ ခရီးထွက်နေတာကြောင့် ဒီတပါတ်မေးမြန်းလျှောက်ထားမှု မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး လို့ပြောပါတယ်။ ၅၀၅-ခ အမှုအတွက်ကတော့ မျက်မြင်သက်သေတွေကိုအပြီးသတ် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးသွားပြီမို့ လာမယ့် အပတ်ထဲမှာတော့ စွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်ကို လျှောက်လဲချက်တင်မယ်လို့ ဒေါ် စန်းမာလာညွှန့်ကပြောပါတယ်။ စွပ်စွဲထားတဲ့ အမှု ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့သလို တရားလိုဘက်ကလည်းအမှုကျူးလွန်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေ မတင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူကပြောပါ တယ်။
" ၅၀၅ အမှုကဟိုတပါတ်က ၂ယောက် ဒီတပါတ် ၂ယောက်စစ်တယ်။ ဒု ဗိုလ်မှုးသန်းအေးရယ်။ နောက်ဦးသန်းထူးဆိုတာလဝကကရယ် လာတာပေါ့။ ၂ ယောက်သူတို့ဘက်က သက်သေအကုန်စစ်ပြီးပြီ။ နောက်တပါတ်ကျော်ရင် အမက လျှောက်လဲချက်တင်ရမယ်။ ၂၇ ရက်နေ့ တင်ရမယ်။ စွဲချက် တင်သင့် မတင်သင့်လျှောက်လဲချက်တင်ရမယ်။ စဆွဲထဲကဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ ၅၀၅ နဲ့စွဲခံရတဲ့ သူတွေ အကုန်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဒီစာထုတ်လို့ဆွဲတယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ သူတို့ကစာ ထုတ်ချိန် ထိန်းသိမ်းခံနေရပြီ နောက် သူတို့လက်မှတ်တွေလဲမပါဘူး။ ထုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ တရားရုံးဘက်ကလည်း သက်သေခံတွေအနေနဲ့လက်ခံပေမယ့်လည်း ဥပဒေအရ ဝင်မဝင်ဖြစ်လာရဦးမှာလေ။ ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်လဲ ဘယ်လိုထုတ်လဲသက်သေပြနိုင်ရမယ်။ အဲလိုမပြနိုင်တာမို့ ဒီအမှုက သက်သေမခိုင်ဘဲ ဆွဲထားတာ။"
ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ အမှုအတွက် တရားလိုတင်တဲ့ သက်သေအချက်အလက်တွေဟာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနဲ့ မညီ ဘူးဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတွေက ပယ်ချခဲ့ပေမဲ့ တရားသူကြီးကလက်မခံပါဘူး။ဒါကြောင့် ဇူလိုင် ၅ ရက်နေ့က ခရိုင်တရားရုံးမှာ အယူခံဝင်ခဲ့ပေမယ့် ခရိုင်ကလည်းလက်မခံဘဲ ပယ်ချလိုက်တာကြောင့် တိုင်းတရားရုံး တင်ပြဖို့ ရှေ့နေတွေဘက်က ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာ အမှုတွေအတွက် ပါဝါတင်တဲ့ ဇူလိုင် ၂၂ရက်မှာဘဲ ၅၀၅- ခအမှု၊ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ အမှုတွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ အောက်ရုံးက ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ဖို့ တိုင်းတရားရုံးမှာ အယူခံတင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ ဆွဲထားတဲ့ အမှုအတွက်က ပြန်လှန် မေးခွန်းမေးခွင့်မှာ မေးရမယ့် မေးခွန်းတွေကို မေးခွင့်မရဘဲ ကန့်သတ်တာကို မကျေနပ်လို့ တိုင်းတရားရုံးကိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုတွေကို စစ်ဆေးနေတဲ့ သီးသန့် တရားခွင်အတွင်း သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ မညီဘဲ လုံခြုံရေးတွေဘက်က ဓါတ်ပုံရိုက်ယူတာ၊ တရားပြိုင်ရှေ့နေတွေရဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ စစ်ဆေးမှုအကျဉ်း ရေးမှတ်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ အမှုအခြေအနေ အသေးစိတ်ကို လုံခြုံရေးတွေဘက်က ဖွင့်ဖတ်တာ စတဲ့လုပ်ရပ်တွေ ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။ ဒါတွေဟာတရားပြိုင်တွေနဲ့ တရားပြိုင်ရှေ့နေတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးစေတဲ့လုပ်ရပ်တွေဖြစ်တာမို့ ရှေ့နေတွေဘက်ကတရားသူကြီးကို တင်ပြ ကန့်ကွက်ခဲ့ရတာမျိုးအထိ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှေ့နေတွေကပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၅ချိုးဖောက်မှုနဲ့ အမှု ၄ မှု၊ နိုင်ငံတော်လှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃ (၁) (ဂ)၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒပုဒ်မ ၈ ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇ ၊ အများပြည်သူ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားအောင်လှုံဆော်မှု လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ တို့ အပြင် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊ စုစုပေါင်း ၁၀ မှုနဲ့ တရားစွဲခံထားရ ပါတယ်။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုစှဲဆိုတဲ့ အဂတိမှုတှအေတှကျ ရှနေ့လေကျမှတျယူ
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ အဂတိလိုကျစားမှုစှဲခကျြတှနေဲ့ စဈကောငျစီက တရားစှဲထားတဲ့အမှုတှေ ရငျဆိုငျဖို့ သူ့ရဲ့ ရှနေ့တှေေ ပွငျဆငျမှုတှလေုပျနပေါတယျ။ မန်တလေးတိုငျးတရားရုံးမှာ တငျထားတဲ့အမှု အဂတိလိုကျစားမှု ၄ မှုနဲ့ပါတျသကျလို့ သူ့ရှနေ့တှေဘေကျက အသေးစိတျ အသအေခြာ မသိကွရသေးပါဘူး။ နပွေညျတျောမှာ စဈဆေးနတေဲ့ အမှုတှထေဲက ၂ မှုကိုတော့နပွေညျတျော သီးသနျ့တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ဇူလိုငျလ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ ဆကျလကျကွားနာစဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ အမှုတှအေကွောငျး နောကျဆုံးသိရထားသမြှ ရနျကုနျကပေးပို့တဲ့သတငျး မခငျဖွူထှေးပွောပွပါမယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအပျေါ တရားစှဲထားတဲ့ထဲက အသေးစားအမှုတှအေတှကျ နပွေညျတျော သီးသနျ့တရားရုံးမှာ ဒီနဆေ့ကျလကျစဈဆေးပါတယျ။ သူ့အပျေါ မန်တလေးတိုငျးတရားရုံးမှာ စဈကောငျစီက အမှုဖှငျ့ထားတဲ့အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျမ ၅၅ ခြိုးဖောကျမှု၊၄ မှု ကို ရငျဆိုငျဖို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက သူ့ရှနေ့တှေကေို ဒီနရေုံ့းခြိနျးတှစေ့ဉျ ရှနေ့လေိုကျခှငျ့ လကျမှတျထိုးပေးခဲ့ပါတယျ။ အဂတိလိုကျစားမှုနဲ့ အမှု ၄ ခု ထပျတိုးတယျဆိုတာသာ လောလောဆယျသိထားပွီး အမှုတှနေဲ့ပါတျသကျတဲ့အသေးစိတျအကွောငျးအရာတှခေုထကျထိ မသိရသေးဘူးလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့တေယောကျဖွဈတဲ့ဒျေါစနျးမာလာညှနျ့ကပွောပွပါတယျ။
" ကိုယျစားလှယျစာရပွီ. အမတို့ရုံးခြိနျးက ၂၂ ရကျနမှေ့လေ။ အမတို့သခြောတော့မသိသေးဘူး. ရဲမှုးပွောတာကတော့ အနျတီက တယောကျထဲ ၂မှု၊ ၃ယောကျတှဲ ၂မှု ၊ ၃ယောကျတှဲကတော့ ဒေါကျတာမြိုးအောငျ၊ ကိုရဲမငျးဦးနဲ့တမှု၊ ဒေါကျတာမြိုးအောငျနဲ့ ဦးမငျးသူနဲ့ တမှုပေါ့။ အဲလိုပွောတာဘဲ။ အမတို့ကသခြောကိုမသိသေးတာ၊အမှုသှားတငျမှသာသိမှာ။ အနျတီတယောကျထဲ ၂မှု၊၃ယောကျတှဲက ၂ မှု အဲလိုပေါ့။ ပွီးခဲ့အပတျက ရမာနျပေးတယျ လာမယျ့ရုံးခြိနျးမှာပါဝါတငျမယျ။"
ရနျကုနျတိုငျးဝနျကွီးခြုပျ လာဘျထိုးတဲ့အနနေဲ့ပေးတဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ ခွောကျသိနျး နဲ့ အကယျဒမီ အခေါကျရှေ ခုနဈပိဿာကို ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျလကျခံယူခဲ့တာအပွငျ၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ တာဝနျယူထားတဲ့ ဒျေါခငျကွညျဖောငျဒေးရှငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ရနျကုနျနဲ့ နပွေညျတျောတို့မှာ မွနေရောရယူတာ၊ အဆောကျအဦးတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ရာထူးအာဏာကို အလှဲသုံးစားလုပျခဲ့တာကိုအဂတိလိုကျစားမှုကျောမရှငျကစဈဆေးတှရှေိ့ထားတယျလို့ ဇှနျလကစဈကောငျစီက ထုတျပွနျထားပါတယျ။ အဲဒီအခကျြတှကေို အခွခေံပွီး အခုမှ မန်တလေးတိုငျးတရားရုံးမှာ စဈကောငျစီက အမှုတငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို အစောပိုငျးက တရားစှဲခံထားရတဲ့ အမှုတှထေဲက အမြား ပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလှုံဆျော၊ လုပျဆောငျတယျဆိုပွီး ရာဇသတျ ကွီးပုဒျမ ၅၀၅-ခ နဲ့ စှဲထားတဲ့ အမှုနဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာစီမံခနျ့ခှဲရေးဥပဒေ တို့ကိုဒီနေ့ ဆကျလကျ ကွားနာပါတယျ။သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျနဲ့စှဲထားတဲ့ အမှုအတှကျမကျြမွငျသကျသတှေေ ခရီးထှကျနတောကွောငျ့ ဒီတပါတျမေးမွနျးလေြှာကျထားမှု မလုပျနိုငျခဲ့ဘူး လို့ပွောပါတယျ။ ၅၀၅-ခ အမှုအတှကျကတော့ မကျြမွငျသကျသတှေကေိုအပွီးသတျ စဈဆေးမေးမွနျးပွီးသှားပွီမို့ လာမယျ့ အပတျထဲမှာတော့ စှဲခကျြတငျသငျ့မတငျသငျ့ကို လြှောကျလဲခကျြတငျမယျလို့ ဒျေါ စနျးမာလာညှနျ့ကပွောပါတယျ။ စှပျစှဲထားတဲ့ အမှု ကြူးလှနျခဲ့ခွငျးမရှိဘူးဆိုတာ သကျသပွေနိုငျခဲ့သလို တရားလိုဘကျကလညျးအမှုကြူးလှနျကွောငျးခိုငျမာတဲ့သကျသေ မတငျနိုငျခဲ့ဘူးလို့သူကပွောပါ တယျ။
" ၅၀၅ အမှုကဟိုတပါတျက ၂ယောကျ ဒီတပါတျ ၂ယောကျစဈတယျ။ ဒု ဗိုလျမှုးသနျးအေးရယျ။ နောကျဦးသနျးထူးဆိုတာလဝကကရယျ လာတာပေါ့။ ၂ ယောကျသူတို့ဘကျက သကျသအေကုနျစဈပွီးပွီ။ နောကျတပါတျကြျောရငျ အမက လြှောကျလဲခကျြတငျရမယျ။ ၂၇ ရကျနေ့ တငျရမယျ။ စှဲခကျြ တငျသငျ့ မတငျသငျ့လြှောကျလဲခကျြတငျရမယျ။ စဆှဲထဲကဟုတျမှမဟုတျတာ။ ၅၀၅ နဲ့စှဲခံရတဲ့ သူတှေ အကုနျထိနျးသိမျးထားပွီး ဒီစာထုတျလို့ဆှဲတယျဆိုတာ ဟုတျမှမဟုတျတာ။ သူတို့ကစာ ထုတျခြိနျ ထိနျးသိမျးခံနရေပွီ နောကျ သူတို့လကျမှတျတှလေဲမပါဘူး။ ထုတျပါတယျဆိုတဲ့ သကျသပွေနိုငျတာမဟုတျဘူး။ တရားရုံးဘကျကလညျး သကျသခေံတှအေနနေဲ့လကျခံပမေယျ့လညျး ဥပဒအေရ ဝငျမဝငျဖွဈလာရဦးမှာလေ။ ရုံးလုပျငနျးလုပျလဲ ဘယျလိုထုတျလဲသကျသပွေနိုငျရမယျ။ အဲလိုမပွနိုငျတာမို့ ဒီအမှုက သကျသမေခိုငျဘဲ ဆှဲထားတာ။"
ပွီးခဲ့တဲ့ ရုံးခြိနျးမှာ ပုဒျမ ၅၀၅ (ခ) ခြိုးဖောကျတယျဆိုတဲ့ အမှုအတှကျ တရားလိုတငျတဲ့ သကျသအေခကျြအလကျတှဟော လုပျထုံး လုပျနညျးနဲ့ မညီ ဘူးဆိုပွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရှနေ့တှေကေ ပယျခခြဲ့ပမေဲ့ တရားသူကွီးကလကျမခံပါဘူး။ဒါကွောငျ့ ဇူလိုငျ ၅ ရကျနကေ့ ခရိုငျတရားရုံးမှာ အယူခံဝငျခဲ့ပမေယျ့ ခရိုငျကလညျးလကျမခံဘဲ ပယျခလြိုကျတာကွောငျ့ တိုငျးတရားရုံး တငျပွဖို့ ရှနေ့တှေဘေကျက ပွငျဆငျနပေါတယျ။ အဂတိလိုကျစားမှုဆိုငျရာ အမှုတှအေတှကျ ပါဝါတငျတဲ့ ဇူလိုငျ ၂၂ရကျမှာဘဲ ၅၀၅- ခအမှု၊ဆကျသှယျရေးဥပဒနေဲ့ ဆှဲထားတဲ့ အမှုတှနေဲ့ပါတျသကျလို့ အောကျရုံးက ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွငျဆငျဖို့ တိုငျးတရားရုံးမှာ အယူခံတငျမယျလို့ ပွောပါတယျ။ဆကျသှယျရေးဥပဒနေဲ့ ဆှဲထားတဲ့ အမှုအတှကျက ပွနျလှနျ မေးခှနျးမေးခှငျ့မှာ မေးရမယျ့ မေးခှနျးတှကေို မေးခှငျ့မရဘဲ ကနျ့သတျတာကို မကနြေပျလို့ တိုငျးတရားရုံးကိုတငျတာဖွဈပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ အမှုတှကေို စဈဆေးနတေဲ့ သီးသနျ့ တရားခှငျအတှငျး သတျမှတျစညျးကမျးခကျြတှနေဲ့ မညီဘဲ လုံခွုံရေးတှဘေကျက ဓါတျပုံရိုကျယူတာ၊ တရားပွိုငျရှနေ့တှေရေဲ့ အမှုနဲ့ပတျသတျလို့ စဈဆေးမှုအကဉျြး ရေးမှတျတဲ့စာအုပျစာတမျးတှနေဲ့ အမှုအခွအေနေ အသေးစိတျကို လုံခွုံရေးတှဘေကျက ဖှငျ့ဖတျတာ စတဲ့လုပျရပျတှေ ရှိတယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့တှေကေပွောပါတယျ။ ဒါတှဟောတရားပွိုငျတှနေဲ့ တရားပွိုငျရှနေ့တှေရေဲ့ ရပိုငျခှငျ့ဆုံးရှုံးစတေဲ့လုပျရပျတှဖွေဈတာမို့ ရှနေ့တှေဘေကျကတရားသူကွီးကို တငျပွ ကနျ့ကှကျခဲ့ရတာမြိုးအထိ ဖွဈခဲ့တယျလို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရှနေ့တှေကေပွောပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဟာ အဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒပေုဒျမ ၅၅ခြိုးဖောကျမှုနဲ့ အမှု ၄ မှု၊ နိုငျငံတျောလှို့ဝှကျခကျြပေါကျကွားမှု ဥပဒပေုဒျမ ၃ (၁) (ဂ)၊ ပို့ကုနျသှငျးကုနျဥပဒပုဒျမ ၈ ၊ ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၆၇ ၊ အမြားပွညျသူ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ပကျြပွားအောငျလှုံဆျောမှု လုပျဆောငျမှုဆိုငျရာ ဥပဒပေုဒျမ ၅၀၅(ခ)၊ တို့ အပွငျ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၅ နဲ့ အမှု ၂ ခု၊ စုစုပေါငျး ၁၀ မှုနဲ့ တရားစှဲခံထားရ ပါတယျ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့် အပြန်ဆုံးလွှတ်ဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ထပ်မံတောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဂတိမှု လေးမှုနဲ့ ထပ်တိုးတရားစွဲ